SBC – Somali Broadcasting Coporation(SBC) » Shir ku aadan amaanka Suxufiyiinta Afrika oo lagu soo gabagabeeyay Addis+SAWIRO
Madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo Culimaa udiinka G/Bari oo maanta kulmay Maxkamada Darajada 1aad ee Gobolka Bari oo Xukun ku riday Jariiflayaal la soo qabtay Xoogaga Xarakada Alshabab iyo Ciidamada Dowlada Fedralka oo ku dagaalamay Gedo Wafdigii Xaqiiqaraadinta Urur goboleedka Igad oo ka ruqaansanaya Kismaayo Kadib…. Fadlan Caawi Gabar Soomaaliyeed oo la xanuunsan xanuun mucjiso ah. BBC SOMALI
Shir ku aadan amaanka Suxufiyiinta Afrika oo lagu soo gabagabeeyay Addis+SAWIRO
September 17, 2012 - Written by editor - Edited byeditor Magaalada Addis Ababa ayaa shalay waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweyne looga hadlaayo Amniga Suxufiyiinta Qaarada Africa. Kulankan oo ay si wada jir ah usoo abaabuleen Ururka Suxufiyiinta Africa ee loo yaqaano FAJ, midowga afrika iyo hay’adda u qaabilsan Qaramada Midoobay waxbarashada, dhaqanka iyo saxaafadda ee UNESCO ayaa waxaa kasoo qeyb galay wafuud ka kala socota 52 dal oo qaarada Afrika.
Shirkan oo ay sidoo kale kasoo qeyb galeen mas’uuliyiin ka kala socotay QM iyo Midowga Afrika ayaa waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay looga hadlay sidii amniga suxufiyiinta Qaarada Afrika loo sugi lahaa loona cirib tiri lahaa dambiyada aan la ciqaabin ee ka dhanka ah Suxufiyiinta Qaarada Africa.
Xaaladda ka jirta dalalka Soomaaliya, Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Congo, Mali, Nigeria iyo Tunisia ayaa si qoto dheer looga hadlay maadaama ay yihiin dalalka loogu dhibaateyn badan yahay suxufiyiinta Afrika.
Furitaankii shirka ayaa waxaa ka hadlay Guddoomiyaha Ururka Suxufiyiinta Afrika ahna Xoghayaha Guud ee Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ Cumar Faaruuq Cusmaan kaasoo sheegay in dhibaateynta iyo colaada lagu hayo suxufiyiinta Afrika ay sii kordheyso ayna ka jirto dalal badan ee qaarada Afrika dhibaato khatar leh oo aan loo dulqaadan karin.
Cumar Faaruuq waxaa uu sheegay in dalka Soomaaliya uu yahay dalka loogu dilka badan yahay suxufiyiinta qaarada Afrika. Dalka Eritrea ayaa waxaa uu noqday halka lagu xabsi badan yahay suxufiyiinta Afrika, ayuu sheegay Cumar Faaruuq. “Siyaasadda ku dhisan xag jirnimada iyo caburinta ayaa waxaa ay noqotay mid si joogta ah loogu isticmaalo suxufiyiinta Afrika. Tani waa midda aan ka arkayno dalkeyga Soomaaliya iyo dalka Nigeria oo bilihii ugu dambeeyay noqday meel lagu dhibaateeyo suxufiyiinta” ayuu ku daran Cumar Faaruuq.
Ahmed Max’ed Max’ud (Axmed Shaam) oo ah Xoghayaha Arrimaha Shaqada ee ururka NUSOJ ayaa kulanka kasoo jeediyay khudbad uu kaga hadlayay dhibaatada loo geysto suxufiyiinta Soomaaliyeed.
“Dilka, xariga iyo cadowtida loo qabo wariyaasha Soomaaliyeed ayaa si aad ah usii korortay bilihii ugu dambeeyay” ayuu Axmed Shaam u sheegay shirkan asaga oo matalayay Ururka NUSOJ iyo dalka Soomaaliya. “Ma jirto cid loo xiray ama loo ciqaabay dhibaatada ay suxufiyiinta Soomaaliyeed u geysteen awadeed,” ayuu ku daray Axmed Shaam oo ay u wada istageen dhamaan ka qeyb galashaayasha shirka oo aad uga xumaa dhibaatada lixaadka leh ee loo geysto suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Faaruuq Cusmaan iyo wafdi uu hogaaminayay oo ka kala socday ururka suxufiyiinta adduunka ee IFJ, hay’adda UNESCO iyo ururka ururada shaqaalaha ee magaceeda loosoo gaabiyo ee ITUC ayaa kulan gaar ah oo ay albaabada u xiran yihiin la qaatay guddoomiyaha Midowga Afrika Jean Ping si ay ugu wadahadlaan sidii si deg deg ah wax looga qaban lahaa dhibaatada sii kordheysa ee soo wajaheysa suxufiyiinta qaarada Afrika.
Gunaanadkii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray qorsho howleed ay si wada jir ah u fulin doonaan ururka suxufiyiinta Afrika ee FAJ, Ururka suxufiyiinta Adduunka ee IFJ, midowga Afrika, hay’adaha QM oo ay ugu horeyso UNESCO. Cumar Faaruuq Cusmaan iyo guddoomiyaha midowga Afrika ayaa lagu wadaa in ay horgeeyaan qorshahan shirka QM ee looga hadli doono amniga suxufiyiinta adduunta ee dhawaan dhici doona.
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa sidoo kale waxaa uu kaga qeyb gali doonaa bisha soo socota horaanteeda magaalada Algeriya ee dalka Algeriya shirka suxufiyiinta Carabta oo isna looga hadli doono amniga suxufiyiinta dalalka Carbeed maadaama Soomaaliya ay xubin ka tahay Jaamacadda Carabta.
Daalacatey :481 Leave a Reply Cancel reply